“Tan Iyo Maalintii Muuse Biixi Talada Dalka Qabtay Dalkeenii Waxa Uu Isku Baddalay Car Juuq Dheh” … Xoghaye Barkhad | Baligubadlemedia.com
“Tan Iyo Maalintii Muuse Biixi Talada Dalka Qabtay Dalkeenii Waxa Uu Isku Baddalay Car Juuq Dheh” … Xoghaye Barkhad
Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI ayaa shaaca ka qaaday dhacdo layaab leh oo uu bannaanka ku keenay arrin ugub ah nidaamka dawladnimo ee Somaliland isaga oo sheegay in Maamulka wakhtigan talada dalka haya ee uu Hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi ay ka dhex dillaacday wax uu ugu yeedhay koox la mid ah nidaamkii Cabdi Ilaygii Kililka shanaad oo ayabuurantay koox Madaxtooyada ku xidhan oo ku takri-fasha awoodda xukuumadda, kooxdaasi oo uu xisbigu sheegay in loo bixiyay HEEGO oo ah koox loogu magac daray kooxdii Ina Ilay karkaarka waydaarisay.
Xoghayaha Caddaaladda Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI Md. Garyaqaan Barkhad Jaamac Batuun oo shalay la hadlayay Telefishanka
HCTV ayaa sheegay in tan iyo markii uu Muuse Biixi talada dalka qabsaday ay soo if baxeen kooxo ku maxaafsada awoodda xukuumadda oo isaga si gaar ah ugu xidhan kuwaasi oo buu yidhi Xoghaye Barkhad ah kox Kutlad ah oo halis ah nidaamka dalka maadaama ay u saansaan eg yihiin kooxdii HEEGO dadkuna durba u bixiyeen magacaasi HEEGO.
Barkhad Jaamac Batuun oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Kutlad baa nidaamkan ka dhex abuurantay. Kutlad taliskii ina Ilay oo kale ah oo HEEGO la yidhaahdo iyo Hogaamiye u dhago nugul oo waxa ay soo jeediyaan sameeya. Kuwani waa Kutlado xukuumadda awooddeeda ku takri fala waana Tiim ama koox la yaqaano kuwa imika waxan sameeyaa. Kooxdan Ihtimaam dalleed iyo dal-jacayl toona aanu qalbiga kaga jirin oo ku foogan Mashaariic iyo masaalix gaar ah oo ay helaan”.
Dhinaca kale Xogahayaha Caddaaladda Xisbiga WADDANI waxa uu sheegay in dalkii maanta isku baddalayo nidaam digteytar ah oo dadka ku khasbaya in aanay hadlin oo aanay dhaliil iyo wax xukuumadda aan raalli galinayn yidhaahdaan. Waxaanu isaga oo arrimahaasi ka hadlaya yidhi: “Tan iyo Maalintii Muuse Biixi talada dalka qabtay dalkeenii waxa uu isku baddalay car juuq dheh. Xuquuqo iyo xorriyaad gaar ah ayuu Dastuurku u damaanad qaaday Muwaadinka reer Somaliland haddii ay qawl tahay, haddii ay qoraal tahay ay wax ku cabbiri karaan. Waar waxbaa innaga kharribane aan wax hagaajisano haddii ay keenayso in xabsiyo la isku guro oo xabsiyadiina noqdaan cadaabul Insaan umaddii lagu ciqaabayo waxa ay noqonaysaa tacaddi xuquuqal Insaan oo aad u dhib badan”. Ayuu yidhi xoghaye Batuun.